बुटवल, ४ मंसिर । दैनिक पत्र दैनिककोे १४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा हुुने ‘चौथो दैनिक पत्र मिडियाकप भलिवल प्रतियोगिता’मा १२ टिमको सहभागिता हुने भएको छ । दैनिक पत्रको प्रकाशन संस्था बुटवल मिडिया प्रकाशन प्रा.लि.को आयोजनामा मंसिर ११ गतेदेखि हुने प्रतियोगितामा रुपन्देहीमा रहेका १२ वटा मिडियाले टिम दर्ता गरेका छन् । प्रतियोगितामा भैैरहवाबाट प्रकाशित गौतमबुद्ध सन्देश, रेडियो लुम्बिनी मणिग्राम, बुटवल एफएम, लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन, रेडियो मलमला मुुर्गिया (सैनामैना), बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, रेडियो समावेशी, रेडियो जागरण, तिनाउ एफएम, सैैनामैैना एफएम र खस्यौली एफएम प्रतियोगितामा सहभागि हुने प्रतियोगिताका संयोजक लक्ष्मण पोखरेलले बताए । प्रतियोगितामा आयोजक दैनिक पत्र टिमको समेत सहभागिता हुनेछ । प्रतियोगिताको खेलतालिका केही दिनमै प्रकाशित गरिने छ । प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले १५ हजार नगद पुरस्कार सहित कप र मेडल पाउनेछन् । दोस्रो हुनेले १० हजार र तेस्रो हुने टिमले ५ हजार नगद सहित मेडल र कप पाउने छन् । दैनिक पत्रले ०६१ सालदेखि मिडियाकप भलिवल प्रतियोगिता गर्दै आएको थियो । केही वर्ष स्थगित प्रतियोगितालाई यो वर्षदेखि निरन्तरता दिइने भएको छ । दैनिक पत्रले वार्षिकोत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको छ । मंसिर १४ गते रक्तसञ्चार केन्द्र बुटवलमा रक्तदान कार्यक्रम हुने भएको हो । त्यस्तै मंसिर १६ गते बुटवलमै कवि सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । वार्षिकोत्सवको विशेषांक माघ २८ गते प्रकाशित
U 19 क्रिकेट: नेपालकाे लाइभ : LIVE ! जितकाे शुभकामना स्वरूप सेयर गराैं ।
काठमाडौं,१ मंसिर | मलेसियामा जारी एसीसी यू-१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा अहिले नेपाल अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । किनरारा ओभलमा भएको खेलमा अफगानिस्तानले टस जिति नेपाललाई ब्याटिङको निम्ता दिएको छ । बिहीबारको पहिलो सेमिफाइलनमा बंगलादेशलाई हराउँदै पाकिस्तान फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ । २०१२ देखि यू-१९ एसियाकप खेल्न सुरु गरेको नेपाल पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पुगेको हो । समूह चरणमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारत र मलेसियालाई हराउँदै नेपालले सेमिफाइलनमा स्थान बनाउँन सफल भएको हो । हेराैं फेसबुक लाइभ भिडियाेः
मेस्सीका नेपाली फ्यानहरूकाे लागि अायाे यस्ताे खुसी कुरा । (याे खुसीकाे कुरा सक्दाे शेयर गराैं)
रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा विश्व चर्चित अर्जेन्टिनी फुटबल स्ट्राकर लियोनेल मेस्सीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको लागि ८ कोठे प्रिफ्याब भवन निर्माण गरिदिएका छन् । २७ महिना अघि गएको विनाशकारी भूकम्पले भत्काई दिएको भवन फुटबल खेलाडी मेस्सीको आर्थिक सहयोग तथा यूनिसेफको सहजीकरणमा निर्माण गरिएको हो । रामेछापको मन्थलीस्थित आकाशेमा निर्माण गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि उद्घाटन पश्चात स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै यूनिसेफका नेपाल प्रतिनिधि टोमो ओजमीले आमा र बच्चाको साथै स्थानीयले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउँने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । प्रिफ्याव भनि निर्माण गरिए पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई दिने भनिएको जग्गा अझै स्वास्थ्य केन्द्रका नाममा नआइसकेकाले तत्कालै पक्की भवन निर्माण गर्न सकिने अवस्था भने नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको नाममा तत्कालै जग्गा नामसारी गर्ने ब्यवस्था गर्न पनि स्वास्थ्य विभागका पुनःनिर्माण इकाईका कार्यक्रम प्रमुख प्रणयप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । कार्यक्रममा मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले स्वास्थ्य संस्थाको नाममा जग्गा नामसारी र ब्लड बैंक स्थापनाको लागि तत्काल पहल गर्ने बताउनुभयो । रामेछाप जिल्लामा भूकम्पले क्षति पुर्याएका स्वास्थ्य संस्थाहरु मध्ये स्पेनको वार्सिलोना क्लबबा स्ट्राइकर मेस्सीको आर्थिक सहयोगमा १३ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण भइरहेको छ । जसमध्य मन्थली र ओख्रेनीमा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य भवन स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । अन्य ११ वटा स्वास्थ्य
नेपाल र हङकङ बिचको खेल सुरु ( लाईभ भिडियो हेरौ ) : विश्व क्रिकेट लिग
काठमाडौं । अाईसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल र हङकङ बिचको खेल सुरु भएको छ । हेर्नुस् लाईभ भिडियो ।
नेपालले हङकङसँगकाे दुबै खेल जित्नु पर्ने, यस्ताे छ अंक तालिका । शुभकामना स्वरूप सक्दाे सेयर गराैं !
२३ असोज, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली हङकङ उड्नु दुई दिन अघि केन्याले नेदरल्याण्डमाथि जित निकाल्यो र अंक तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लियो । यसले दबावको पारो कति बढायो ? हङकङ उड्नु अघि राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का भन्छन्, ‘२०१० मा डिभिजन फाइभबाट सुरु गर्दादेखि नै हरेक खेल जित्नै पर्ने भन्दै यहाँसम्म आयौं । मलाई लाग्छ, हामी अभ्यस्त भइसक्यौं ।’ उनले अघि भने, हरेक प्रतियोगिता जित्नै पर्ने, कहिले विश्वकप छनोट कहिले विश्व क्रिकेट लिग । अवश्य दबाव छ, तर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा यो भइराख्छ ।’ हो पनि नेपालले थुप्रै प्रतियोगिताहरुमा यस्तै दबावका बीच जित निकालेको छ । यो पटक पनि त्यही दबावका बीच हङकङलाई उसकै घरेलु मैदानमा हराउने लक्ष्य लिएको छ । शीर्ष चारमा परेर विश्वकप छनोटको सम्भावना कायमै राख्न नेपाललाई बाँकी सबै खेल जित्नु बाध्यता छ । शीर्ष दुईमा रहेका नेदरल्याण्ड्स (१८) र पपुवा न्यूगिनी (१६) ले विश्वकप छनोटमा स्थान पक्का गरिसकेका छन् । स्कटल्याण्ड (१५), केन्या (१२), हङकङ (११) र नेपाल (८) दुई स्थानका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपाल र हङकङको खेल शुक्रबार र आइतबार छ । अन्तिम चरणमा नेपालले यूएई, केन्याले स्कटल्याण्ड र हङकङले पपुपा न्यूगिनीसँग खेल्नेछ । कप्तान पारस भन्छन्, ‘अंक तालिका अझै पनि खुला छ । तर, हाम्रा लागि जित्नुको अर्को उपाय छैन ।’ हङकङका लागि
नेपालको शानदार जित, सन्दिपले लिए ७ विकेट । थाइल्याण्डलाइ कतिमा अल आउट गर्यो होला नेपालले ?
काठमाडौं / एसीसी यू-१९ इस्र्टन रिजन प्रतियोगितामा नेपालले शानदार सुरुवात गरेको छ । अनिलकुमार शाहको उत्कृष्ट ब्याटिङ र सन्दिप लामिछानेको उत्कृष्ट बलिङको मदतमा नेपालले थाइल्याण्डलाई २५५ रनले हरायो । नेपालले प्रस्तुत गरेको २८२ रनको लक्ष्य पछ्याएको थाइल्याण्ड १० ओभरमा २६ रन जोड्दा अलआउट भयो । नेपालको घातक बलिङका सामू निरिह देखिएका उसका कुनै पनि ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् । नेपालमा सन्दिपले ४ ओभरमा ६ रन खर्चिएर ७ विकेट हात पारे । यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले ५० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर २८१ रन बनाएको थियो । नेपालका लागि अनिलकुमारले उत्कृष्ट पारी खेले । उनी मात्र ९ रनले शतक बनाउन चुके । ७४ बलको सामना गरेका उनले ६ चौका र ५ छक्काको मलतमा ९१ रन बनाए । यस्तै प्रनित थापा मगरले अर्धशकत पुरा गरे । ६१ बलको सामना गरेका उनले तीन चौका र एक छक्कासहित ५० रन बनाए । सन्दिप सुनारले ३२, रोहितकुमार पौडेलले २८, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र पवन सरार्फले २२ र आसिफ शेखले २१ रन बनाए । किशोर महतो २ रनमा अविजित रहे ।
नेपालको सडकमा फुटबल खेल्दै आएका सडक बालक विश्वकप फुटबल खेल्दैछन्, खुशीले सबै दंग !
काठमाडौं, भदौ २३ । सानैमा बुवा बितेपछि कालीकोटका पवन शाहीलाई आमाले राम्रोसँग पाल्न सक्नुभएन । खाना र नाना नभएपछि पवन सडकमा आए । कसैको सहारा नभएपछि आफ्नो जिन्दगी सडकमै जाने भयो भनेर पवन चिन्तामा थिए । तर ३ बर्षअघि काठमाडौंको एक बालगृहले उनलाई काठमाडौंमा ल्यायो र पालनपोषण गर्न थाल्यो । पढाउन पनि थाल्यो । अहिले उनलाई नसोचेको अवसर आयो, सडक बालकको विश्वकप फुटबलको लागि अभ्यास गर्ने ।सडकबाट अर्को संसारमा जाने कल्पनासम्म नगरेका पवन रुसमा आउँदो मे महिनामा हुने सडक बालकको विश्वकपमा नेपाली टोलीमा पर्न दशरथ रंगशालामा पसिना बगाउँदैछन् । देशभरबाट आएका १० टिमका झण्डै १ सय जनाबाट १८ जना खेलाडी छानिने भएकाले पवन शाहीले खुब मेहेनेन गर्नुपरेको छ । ‘मैले त यसरी बालगृहमा आउन पाउँछु भन्ने पनि सोेचेको थिएन, तर मैले त घरमा भन्दा पनि माया गर्ने होस्टेल पाएको छु, त्यसैमा खुसी थिएँ, तर अहिले त सोच्दै नसोचेको कुरा विश्वकपमा खेल्ने सम्भावना बढेको छ’ दशरथ रंगशालामा उज्यालोसँग कुरा गर्दा खुशीका आँसु झारेका पवनले भने, ‘अहिले मलाई समाजले सडकमा बस्ने भुस्याहाको नजरले हेर्छ, विश्वकप खेलेर समाजमा ठूलो मान्छे बन्ने मेरो इच्छा छ, तर त्यो इच्छा टाढा छैन ।’ बुवा सानैमा बितेपनि पवनको घरमा आमा र सानो भाइ छन् । ‘सानोमा सडकमा थिइस, अब त राम्रो ठाउँमा छस, भाइलाई पढाउने र मलाई पाल्ने
५ साउन, काठमाडौं । आइसीसी यू-१९ विश्वकपको एशियाली छनोटमा नेपालले अफगानिस्तानसँग लज्जास्पद हार व्यहोरेको छ । १९१ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल २६ ओभरमा मात्र ४९ रनमा अलआउट भयो र अफगानसँग १४१ रनले पराजित भएको छ । सुरुवाति दुई खेल जितेको नेपाली किशोर टोलीको वास्तविक परीक्षा अफगानी टिमसँग हुने मानिएको थियो । जसमा बलिङतर्फ ठीकै प्रदर्शन गरेपनि ब्याटिङ निकै खराब रहृयो । नेपालले बनाएको ४९ रन मध्ये २६ रन पवन सरार्फ एक्लैले बनाएका थिए । छैटौं ओभरको अन्तिम बलबाट नेपालको विकेट पतन सुरु भएको थियो । पहिलो विकेटका रुपमा ओपनर आसिफ शेखलाई ६ रनमा गुमाएको नेपालले अर्को ओभरमा सन्दिप सुनारलाई पनि २ रनमा गुमाउन पुग्यो । सन्दिप लगातार तेस्रो खेलमा चल्न सकेनन् । नवौं ओभरमा नेपालका लागि घातक सावित बन्यो । अफगानी बलर नभिन उल हकले यस ओभरको चौथो, पाचौं र छैटौं बलमा क्रमसः दीपेन्द्र सिंह ऐरी, प्रनित थापामगर र अनिल शाहलाई आउट गराउँदै प्रतियोगिताकै पहिलो हृयाटि्रक लिए त्यसपछि नेपाल निक्कै दबावमा आयो । आठौं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका पवन सर्राफले सम्हालिएर खेल्ने प्रयास गरे । तर, उनलाई अन्य ब्याट्सम्यानले साथ दिन सकेनन् । अन्तिम विकेटका रुपमा आउट भएका पवनले २६ रन बनाए । अन्य व्याट्सम्यानले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् । आशिफ शेखले ६ रन बनाउँदा आदिल खान र दिपेन्द्र सिंह
एभरेष्ट माविका विद्यार्थी खेलाडिलाई दशवटा भलिवल हस्तान्तरण
बुटवल, ४ साउन । बुटवलमा रहेको एभरेष्ट इङ्गलिस माविका विद्यार्थीहरुको भलिवल प्रतिको रुचिलाई देखेर जापानमा बसोबास गर्दै आएका एक जना भलिवल खेलाडिले १० वटा भलिवल विद्यालयलाई सहयोग गरेका छन् । पुर्व राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी तथा पश्चिमाञ्चल भलिबल संघका भलिबल प्रशिक्षक समेत रहेका स्याङ्जा निवास नविनकुमार गुरुङ्गले दशवटा भलिवल विद्यालयका प्राचार्य कृष्ण न्यौपानेलाईगर्नु भएको होे । भलिवल हस्तान्तरण कार्यक्रममा एभरेष्टका भलिबल खेलाडीहरु निरन्तर पश्चिमाञ्चलको भलिबल टिममा समावेश भई उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सफल रहेको र भविष्यमा समेत अझै राम्रो नतिजा निकाल्ने उत्साह थापियोस भनेर विद्यालयलाई १० थान भलिबल उपहार दिएको प्रशिक्षक गुरुङ्गले बताउनुभयो । एभरेष्टका प्राचार्य न्यौपानेको आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा विद्यालयका बरिष्ठ सहायक प्राचार्य माधवप्रसाद आचार्य, सहायक प्राचार्य भिमसेन गौतम, भलिवल प्रशिक्षक अर्जुन घिमिरे लगायतले बोल्दै विद्यार्थीहरुलाई खेलप्रतिको उत्साहलाई बढाउनका खेलकुद सामग्री प्रदान गर्नु उदाहरणीय कार्य भएको बताउदै निरन्तर सहयोगको आवश्यकता औल्याउनुभयो । यसैबीच सोही कार्यक्रमको अवसर पारि पश्चिमाञ्चल भलिबल संघका संस्थापक अध्यक्ष तमू धि जापानका अध्यक्ष श्रीभक्त गुरुङ्गले विद्यालयका छात्रा भलिबल खेलाडीलाई १२ जोर मिकासा नि–क्याप उपहार प्रदान गर्नु भएको थियो ।